Madaxweynihi Hore Ee Suudaan Oo Maanta Lagu Oogay Laba Dacwadood – somalilandtoday.com
Madaxweynihi Hore Ee Suudaan Oo Maanta Lagu Oogay Laba Dacwadood
(SLT-Khartoum)-Garsoore maxkamadeed ayaa maanta si rasmi ah labada dacwadood oo midi tahay heysasho lacago qalaad oo sharci darro ah iyo musuq maasuq kusoo oogay madaxweynihi hore ee dalka Sudan Omar al-Bashir.
Isaga oo ka jawaabayay su’aalo marki ugu horreysay maxkamadda lagu dhex weydiiyay ayuu Al Bashiir sheegay, inuu lacag dhan 25 milyan oo doollarka Mareykanka ah ka helay dhaxal-sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman, lacagaha kalana uu ka helay meelo kala duwan oo uusan carrabaabin.
Laakin madaxweynihi hore ee Sudan ayaa isku difaacay in lacagahaasi uusan u adeegsan danahiisa gaarka ah.
Garsoorihi maxkamadda ayaa diiday codsi ah in dammiin lagu sii daayo Cumar Al Bashir. Wuxuu maxkamadda ka sheegay in muddada xabsiga lagu sii heyn doono ay maxkamadda goo’aan ka gaari doonto 7-da bisha September.